Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment मृत्यु पश्चात १३ दिनसम्म ‘आत्मा’ कहाँ रहन्छ ? - Pnpkhabar.com
एजेन्सी : गरुड पुराण वैष्णव सम्प्रदायसँग सम्बन्धित रहेको छ । यस पुराणका अनुसार सनातन धर्ममा मृत्यु पश्चात सद्रति कसरी मिल्यो ? मृत्यु पश्चात के हुन्छ ? यी कुराहरुबारे यस ग्रन्थमा चर्चा गरिएको छ ।